I-Amazon, i-Apple, i-Google ne-Zigbee bahlongoze ukudala indinganiso evulekile yamadivayisi we-smart home | Kusuka kuLinux
I-Amazon, i-Apple, iGoogle neZigbee bahlele iphrojekthi ehlanganyelwe ebizwa nge- "Ikhaya elixhunyiwe nge-IP" okuyinto ihlose ukuthuthukisa indinganiso eyodwa evulekile ngokususelwa kumthetho olandelwayo we-IP yakhelwe ukuhlela ukusebenzisana kwamadivayisi asekhaya ahlakaniphile.
Le phrojekthi izogadwa iqembu elizimele elisebenzayo kudalwe ngaphansi kwezivumelwano weZigbee Alliance futhi akuhlobene nokwenziwa kweprotocol ye-Zigbee 3.0 / Pro. Lapho wenza indinganiso, ubuchwepheshe kuzobhekwa esetshenziswa emikhiqizweni yamanje kusuka ku-Amazon, i-Apple, i-Google namanye amalungu omfelandawonye weZigbee.
Izonikezwa ukusekelwa kwezinga jikelele kuvamile lokho ayihlanganisiwe nezinqumo zomkhiqizi othile kumamodeli wesikhathi esizayo amadivayisi ezinkampani ezithintekayo kuphrojekthi. IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (phili Phips Lighting), Silicon Labs, Somfy kanye neWulian nabo bamemezele ukuzimisela kwabo ukujoyina ithimba.
Ngenxa yesilinganiso esizayo, Onjiniyela bazokwazi ukudala izinhlelo zokusebenza zokulawula okuhlakaniphile ekhaya elisebenza njengeqembus evela kubakhiqizi abahlukahlukene futhi iyahambisana nezinkundla ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-Google Assistant, i-Amazon Alexa ne-Apple Siri.
Incazelo yokuqala izofaka umsebenzi ngaphezu kwe-Wi-Fi ne-Bluetooth amandla aphansi, kepha obunye ubuchwepheshe, obufana ne-Thread, Ethernet, amanethiwekhi amaselula, neziteshi ze-broadband, nazo zingasekelwa.
I-Google idlulise amaphrojekthi wayo amabili avulekile ukusetshenziselwa iqembu elixhunyiwe ngeqembu le-IP: elinye lazo yi-OpenWeave kanti enye i-OpenThread, esivele isetshenziselwa imikhiqizo yasekhaya ehlakaniphile futhi isebenzisa umthetho olandelwayo we-IP wokuxhumana.
I-OpenWeave Inqwaba yamaphrothokholi asezingeni lokufaka ukuhlela ukuxhumana phakathi kwamadivayisi ahlukahlukene, phakathi kocingo nomakhalekhukhwini, noma phakathi kwedivayisi nengqalasizinda yamafu esebenzisa iziteshi zokuxhumana ezingajwayelekile kanye namandla okusebenza kumanethiwekhi acishiwe, i-Wi-Fi, i-Bluetooth amandla aphansi namaselula.
I-OpenThread ukuqaliswa okuvulekile kwe-Thread network protocol esekela ukwakhiwa kwama-mesh network kusuka kumadivayisi we-IoT futhi isebenzisa i-6lowPAN (IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Networks). Lapho kwakhiwa umthetho olandelwayo, kuzosetshenziswa nentuthuko nezivumelwano ezisetshenziswa ezinhlelweni ezinjenge-Amazon Alexa Smart Home, i-Apple HomeKit neDotdot evela kubumbano lweZigbee.
Le phrojekthi izosiza ukuxhumana ngamadivayisi asekhaya ahlakaniphile, izinhlelo zokusebenza zeselula nezinsizakalo zefu ngenkathi kuchazwa 'isethi ethile yobuchwepheshe I-IP-based Networking Yesitifiketi Sedivayisi ».
Kanjalo, izinkampani zithi amadivayisi ahambisanayo kufanele asekele okungenani ubuchwepheshe obulodwa (kodwa hhayi konke) ukuhambisana.
Ngendlela evulekile yomthombo, iqembu elisebenzayo hlela ukusebenzisa ubuchwepheshe obukhona kwe-Smart Home, kufaka phakathi i-Amazon Smart Home yase-Amazon, i-Apple's HomeKit, i-Google's Weave, kanye nemodeli yedatha yeZigbee Alliance's Dotdot ukuletha umthetho olandelwayo ukumaketha ngokushesha.
Isinqumo sokusebenzisa lobu buchwepheshe kulindeleke ukuthi sisheshise ukuthuthukiswa kweprotocol futhi silethe izinzuzo kubakhiqizi nakubathengi ngokushesha okukhulu.
Ngoba inhloso yephrojekthi ukwakha indinganiso yokuxhuma yendawo yonke, igxile ku-IP, isisekelo se-Intanethi siyisinqumo esisobala.
Ngokwamukela i-IP, abalingisi abane abaphambili kule phrojekthi ukhethe isisekelo esiqinile lapho uzokwakha khona izinga lakho elisha lokuxhuma.
Futhi ngokwanda kokuphepha kwenethiwekhi njengenhloso eyinhloko, iqembu elisebenzayo lizophinde lithole izindlela eziningi zokuphepha ezenzelwe i-IP.
Ukuqaliswa kokusebenza kwenkomba yenqubo entsha ehlongozwayo kuzinga elizayo kuzothuthukiswa kwi-GitHub njengephrojekthi evulekile, inguqulo yokuqala elindelwe ngasekupheleni kuka-2020.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo Mayelana nephrojekthi ye-IP Exhumene ne-IP, ungabheka imininingwane kuwebhusayithi yayo esemthethweni. Isixhumanisi yilokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Amazon, i-Apple, i-Google, ne-Zigbee bahlongoze ukudala indinganiso evulekile yamadivayisi asekhaya ahlakaniphile